Fikarohana momba ny firaisana Misy jiosy Okrainiana miforona indray ao amin'ny fianakaviana Kristiana any Oklahoma: ny raharaha Reincarnation de Marty Martyn | Ryan Hammons - Fikarohana Reincarnation
Noarihin'i: Jim Tucker, MD sy Erlendur Haraldsson, PhD
From: Nahita hazavana aho ary tonga eto, nosoratan'i Erlendur Haraldsson, PhD sy James Matlock, PhD
Ny fiainan'i Marty Martyn
Morris Kolinsky dia teraka tao Philadelphia May 19, 1903. Ny ray aman-dreniny dia jiosy Okrainiana izay nifindra monina tany Etazonia vao tsy ela. Nanana anabavy roa izy, ary maty ny fahazazany. Nifindra tany New York City i Morris sy ny rahavaviny velona. I Morris dia nahavita nandondona dihy tao amin'ny Broadway. Nifindra tany Los Angeles izy avy eo ary naka ny anaran'ny sehatra Marty Martyn.
Tao amin'ny 1932 Marty dia nanana anjara tamin'ny sarimihetsika Alina aorian'ny alina, izay kintan'i George Raft, na dia tsy tafiditra amin'ny tsipika fitenenana aza ny andraikitr'i Marty. Tsy nahavelona fivelomana amin'ny maha-artista azy izy, koa nanangana ny masoivoho talenta Marty Martyn. Nahomby ny biraony.
Ilay mpilalao sarimihetsika iray, Marty dia sakaiza toa an'i Gordon Nance, izay nanao horonan-tsarimihetsika mpiompy amin'ny alàlan'ny anarana hoe Wild Bill Elliot. Nance koa dia nanao varotra ho an'ny sigara Viceroy.
Marty Martyn dia nanambady inefatra ary nanangona zanakavavy biolojika iray ary dimy mianadahy. Miaraka amin'ny fanambadiany fahefatra dia nanangana ara-dalàna ny zanany telo vao teraka i Marty izay zazalahy avokoa. Ny fianakaviana dia nipetraka tao Beverly Hills amin'ny Roxbury Drive tao amin'ny trano lehibe iray misy dobo iray ao an-tokontany.
Tian'i Marty amoron-dranomasina i Marty, be an-taribato izy ary be dia be ny tara-masoandro matetika. Nahafinaritra azy ny sakafo sinoa, akanjo tsara ary fitsangatsanganana, nandeha sambo tany Eropa Mpanjakavavina sy nitsidika an'i Paris imbetsaka. Repoblikana izy, Repoblikana.
Marty Martyn dia nanao ratra leukemia ary maty tany amin'ny hôpitaly misy ratra amin'ny cerebral tamin'ny Desambra 25, 1964 tamin'ny faha-61.
Marty Martyn Reincarnates any Oklahoma
Ryan Hammons dia teraka tany Muskogee, Oklahoma tamin'ny 2004, 40 taona taorian'ny fahafatesan'i Marty Martyn. Ny anaran-drenin'i Ryan dia Cindy ary ny fianakaviana dia Kristiana. Ny fampivoarana ny kabarin'i Ryan dia nahemotry ny adenoids nitarina, izay antokon'ireo sela misy ny hery fiarovan'ny vatana ao ambadiky ny vava. Ny adenoida lehibe dia mety hanakana ny fisefoana, ary koa ny fitenenana. Taorian'ny nanesorana ireo adenoidany tamin'ny fandidiana, dia nanomboka niteny tamin'ny fehezanteny feno i Ryan nony efa-taona izy. Tamin'izay fotoana izay dia nanomboka niresaka momba ny taloha i Ryan.
Nilaza i Ryan fa te handeha hody any Hollywood izy ary niangavy ny reniny haka azy ao mba hitsidihany ny “fianakaviany hafa”, anisan'izany ny zanany lahy telo lahy izay nampanahy azy. Nilaza izy fa manana anabavy roa ary zanany iray biolojika, zanakavavy tamin'ny fanambadiana voalohany izy.
Nilaza i Ryan fa miasa amin'ny “masoivoho” izay nanovan'ny olona ny anarany izy ireo. Nahatsapa izy fa manana fahefana amin'ity toerana ity izy amin'ny fanaovana fanambarana toy ny:
“Fantatrao ve hoe iza aho? Raha misafidy amiko ianao dia tsy hiasa intsony amin'ity tanàna ity. ”
Nilaza i Ryan fa manana trano lehibe iray izy misy dobo filomanosana eo an-dàlambe iray misy anarana hoe "rock" ao. Ankoatr'izay, dia nilaza izy fa nandeha an-tsambo, nitsidika an'i Paris ary nijery ny Eiffel Tower.
Nilaza i Ryan fa nandihy tao Broadway izy ary tiany ny mampiseho fihetsiketsehana fandihizana. Ao amin'ny akanin-jaza dia nilalao tamin'ny fitantanana sarimihetsika izy. Notantarainy fa nankany Chinatown izy taloha ary rehefa nentin'ny ray aman-dreniny tany amin'ny trano fisakafoanana sinoa izy taloha, dia nahay nampiasa chopstick i Ryan nefa tsy nampianarina. Nahafinaritra azy ny solomaso solomaso ary nilaza izy tamin'ny fiainany lasa, fa maty sun matetika izy. Nilaza ihany koa i Ryan fa tsy tiany i Franklin Delano Roosevelt (Demokraty.)
Fahatanjahan-tena: Notarihin'i Ryan tany an-danitra i Cindy
Nolazain'i Ryan tamin'ny reniny fa nahita azy avy any an-danitra izy ary efa nahafantatra azy tamin'ny fiainana taloha. Nilaza izy fa nosafidiany ho reniny, mba hikarakarana azy.
Notantarain'i Ryan fa tsaroany fa tao an-kibon'i Cindy izy ary nanontany izy ny antony itiavany azy ho zazavavy. Nanambara i Ryan fa nandinika ny fitomaniany nandritra ny fotoana ela izy rehefa fantatr'i Cindy fa hiteraka zazalahy izy. Gaga i Cindy fa fantatr'i Ryan ny momba ilay tomany, izay marina, saingy tsy nanana fomba hahafantarana izany tranga izany tamin'ny fomba mahazatra i Ryan satria tsy nitantara izany taminy na ny dadan'i Ryan.
Cindy manadihady ireo fahatsiarovana ny fiainana taloha nataon'i Ryan ary nifandray tamin'i Jim Tucker, MD
Nanapa-kevitra ny hanadihady ny tenin'i Ryan momba ny androm-piainany i Cindy ary nanao fikarohana tamin'ny Hollywood tao amin'ny tranomboky ny vondrom-piarahamonina izy. Raha namitaka ireo boky ireo i Cindy sy Ryan dia tonga naka sary avy amin'ilay sarimihetsika izy ireo Alina aorian'ny alina. Fantatr'i Ryan ny iray tamin'ireo lehilahy tao amin'ilay sary fa ny tenany. Ity lehilahy ity dia sary eo amin'ny ankavanana. Nilaza i Ryan fa nisy lehilahy iray antsoina hoe George ary lehilahy fahatelo tao amin'ilay sary dia naman'izy ireo izay sakaizany ary nanana kiran'ny mpivarotra sigara. Mampalahelo fa ilay lehilahy izay nolazain'i Ryan fa izy dia tao amin'ny fotoana nitondrana azy taloha dia tsy nofaritana anarana tao amin'ilay boky na ireo sarimihetsika momba ny sarimihetsika. Alina aorian'ny alina.
Noho io fampahalalana io dia nifandray tamin'i Jim Tucker, MD, mpitsabo aretin-tsaina amin'ny oniversite any Virginia, i Cyndi, izay nandray ny asan'ny Ian Stevenson, MD. Rehefa dimy taona i Ryan dia nandeha tany Oklahoma ny Dr. Tucker handinika momba ity raharaha ity. Orinasa famokarana fahitalavitra izay manao fandaharana ho an'ireo ankizy manana fahatsiarovana taloha niainany dia niaraka tamin'i Tucker.
Niaiky ny tokantranon'ilay sakaizany taloha, Wild Bill Elliot i Ryan
Miorina amin'ny fitovian-tarehy, ny mpiasa orinasa orinasa dia nanao fampahafantarana hoe iza ilay mpilalao Alina aorian'ny alina sary nolazain'i Ryan fa izy. Nentin'ny orinasa Ryan i Los Angeles ary notateriny tao an-tranon'ity mpilalao ity izy, saingy tsy fantatr'i Ryan izany. Fantatr'i Ryan tokoa ny tranon'i Wild Bill Elliot. Faranana fa ny mpilalao sarimihetsika dia lalao taloha tsy marina, ny orinasam-pamokarana fahitalavitra dia nanakarama arkivista sarimihetsika izay nanondro ilay lehilahy miafina tao amin'ilay sary hoe Marty Martyn. Enin-taona i Ryan tamin'izay.
Nihaona tamin'ny zanany vavy taloha i Ryan
Tamin'ny fitsangatsanganana manaraka tany Kalifornia dia nifanena tamin'ny zanany vavy taloha i Ryan. Vao teraka valo taona io zanakavavy io tamin'ny fotoana nahafatesan'i Marty Martyn rainy, raha ny tenany dia 57 taona rehefa nihaona tamin'i Ryan. Mbola nilaza i Ryan fa nanaiky ny tarehiny.
Te hianatra ny Jodaisma i Ryan, ny fiainany taloha
Na dia nanao ny fanadihadiana voalohany momba an'io tranga fahaterahana io aza i Jim Tucker, ny manam-pahaizana momba ny psikolojia Erlendur Haraldsson, dia nanao fanadinadinana i Cindy tamin'ny alàlan'ny telefaona i PhD. Ryan dia 11 taona tamin'ny fotoana nifanaovana tamin'ny resadresaka tamin'ny telefaona Dr. Haraldsson. Haraldsson dia nanamarika tamin'io fotoana io fa tian'i Ryan ny mozika avy amin'ny 1950 ary mifanerasera amin'ny antoko Repoblikana izy.
Ny tena mahaliana dia ny Dr. Haraldsson dia nanamarika fa te hianatra ny jodaisma i Ryan, izay loharanon'ny "ady" ao amin'ny fianakaviany kristiana.
Fiovan'ny Fivavahana: I Marty Martyn dia jiosy sy teratany Okrainiana, raha i Ryan dia teraka tamin'ny fianakaviana Kristiana, Amerikanina tany Oklahoma.
Fanahy Masina ao amin'ny Firaisana ara-nofo any am-parany: Nilaza i Ryan fa naka an'i Cindy ho reniny avy any amin'ny fon'ny fanahy izy. Fantatr'izany, fantany fa maniry zazavavy i Cindy mandritra ny fitondrana vohoka niaraka tamin'i Ryan ary nitomany nandritra ny fotoana maharitra izy rehefa nahalala fa tera-dahy izy. Nisedra io toe-javatra io i Ryan tamin'ny tontolon'ny fanahy.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Nihaona tamin'ny zanany vavy taloha i Ryan. Ankoatr'izay, nilaza i Ryan fa nahafantatra an'i Cindy izy tamin'ny nitombo teo aloha
Ny fiainana taloha talenta: Fantatr'i Ryan ny fomba fanaon'ny dihy miketaka ary mahay mampiasa chopstick tsy misy toromarika izy.
Loharano: Haraldsson, Erlendur ary Matlock, James: Nahita hazavana aho ary tonga eto, White Crow Books, 2016, pejy 214-218